मधुमेहको साथ बस्ने: मेरो उपचार यात्रा - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
मनोरञ्जन कम्पनी, समाचार समाचार समाचार, कल्याण कम्पनी समुदाय, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण चेकआउट औषधि जानकारी
मुख्य >> समुदाय >> मैले कसरी मधुमेह रोगी निदान पाइन - र यससँग बस्न सिकें
मैले कसरी मधुमेह रोगी निदान पाइन - र यससँग बस्न सिकें
२० वर्ष पहिले मलाई टाइप २ मधुमेह भएको पत्ता लाग्दा म छक्क परेन। मेरो बुबाको परिवारको पक्षमा मलाई चिन्ने सबैजनालाई यो रोग लागेको थियो, र मैले निश्चित रूपमा शारीरिक मापदण्ड पूरा गरें: मध्यम आयु र थोरै वजन।
मलाई डाक्टरमा पठाइएको शुरूमा खमीर संक्रमण हो जुन कहिले हट्दैन, र जब मेरो उपवास रगत ग्लुकोजको स्तर २ 28० मा फिर्ता आयो, मेरो डाक्टरले मलाई तुरुन्तै दुई प्रकारको औषधी राख्न लगायो मेरो कम गर्न। ग्लुकोज स्तर ।
मधुमेह बिभिन्न किसिमका के हुन्?
जब मानिसहरू मधुमेहलाई जनाउँछन्, उनीहरूले सामान्यतया मधुमेह मेलिटसलाई जनाउँदैछन्, न्यूयोर्क शहरको मेट्रोपोलिटन अस्पताल केन्द्रको आपतकालीन चिकित्सा सहयोगी प्रमुख एमडी रजनीश जायसवाल भन्छन्। इन्सुलिन-निर्भर मधुमेह मेलिटस (आईडीडीएम), वा टाइप १ मधुमेह, तब हुन्छ जब शरीरले कुनै पनि इन्सुलिन उत्पादन गर्दैन। र गैर-इन्सुलिन निर्भर मधुमेह मेलिटस (NIDDM), वा टाइप २ मधुमेह - जुन सबैभन्दा सामान्य प्रकारको लेखा हो सबै केसहरूमा% 85% देखि% ०% यो ईन्सुलिन अभावको सट्टा इन्सुलिन प्रतिरोधको विशेषता हो।
प्रिडिएबिटिसमा रगतमा चिनीको मात्रा औसत भन्दा उच्च छ तर मधुमेह मेलिटस निदानको लागि पर्याप्त छैन अमेरिकी मधुमेह संघ ।
सम्बन्धित: प्रेडियबेटिसको लागि तपाईंको गाइड
जबकि कम ज्ञात, गर्भलिंग मधुमेह गर्भावस्था को समयमा हुन्छ। जबकि बिरामीको रगत ग्लुकोजको स्तर प्राय: जन्म दिइसकेपछि सामान्यमा फर्कन्छ, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि गर्भधारण मधुमेह भएका महिलाहरूलाई पछि जीवनमा टाइप २ मधुमेह हुने खतरा बढी हुन्छ।
यस अनुसार रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (सीडीसी), मधुमेह जटिलताहरूमा मुटुको रोग, हृदयघात, किडनी रोग, स्नायु क्षति, खुट्टामा क्षति, मौखिक स्वास्थ्य समस्या, सुन्ने शक्ति, दृष्टि गुमाउनु, र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू पर्दछन्। भाग्यवस, यी मध्ये धेरै सही जीवनशैली परिवर्तनहरू (जस्तै स्वस्थ खानपान र स्वस्थ तौल कायम गर्न नियमित शारीरिक गतिविधि) को साथमा मधुमेह औषधी जस्तै इन्सुलिन थेरापीको साथ रोक्न सकिन्छ।
मेरो मधुमेह निदान
म केवल यो अनुमान गर्न सक्छु कि मेरो प्रारम्भिक निदान मेरो उमेर, परिवारको इतिहास, र शारीरिक विशेषताहरूमा आधारित थियो। म यो समयमा बिमा गरिएको थिएन र स्थानीय स्वास्थ्य विभागले रगतमा ग्लुकोज परीक्षण गर्यो र मलाई स्थानीय डाक्टरमा हस्तान्तरण गर्यो। मेरो बहिनीमा टाइप १ मधुमेह रहेको छ र उनको रगतमा ग्लुकोजको स्तर स्थिर राख्न संघर्ष गरिरहेको छ। मलाई थाहा थियो कि म त्यो निदान चाहान्दिन। टाइप २ डायबेटिसको लेबल लगाएर अफिस छोडेपछि मलाई ढुक्क महसुस भयो।
खोकी को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि के हो
यदि एक व्यक्ति एकदम पातलो र स्वस्थ देखिन्छ, तर निदानमा धेरै गम्भीर संकेतहरू प्रदर्शन गर्दछ (डिहाइड्रेशन, मूत्र आवृत्ति, गम्भीर वजन घटाउने) बिरामी प्राय: सुरुमा विस्तृत निदान परीक्षणको माध्यमबाट जान्छ, स्टेफनी रेडमन्डका अनुसार, फर्म.डी। एक सह -डायडेयडेसिडोक्टोर। com को फाउन्डर।
जहाँसम्म, एक बिरामी अधिक वजन र एक वयस्क छ, डा। रेडमन्ड जारी छ, एक मात्र टाइप2मान्न सक्छ र पहिले तिनीहरूलाई प्रयास गर्नुहोस्। मेटफॉर्मिन वा अन्य मौखिक औषधिहरू तिनीहरूले प्रतिक्रिया देखाउँछन् कि भनेर हेर्न। यदि तिनीहरू गर्दैनन्, त्यसोभए तिनीहरूलाई थप परीक्षण पूरा गर्न भनियो। यदि बिरामी उच्च बीएमआईको साथ 45 45 भन्दा माथिको छ भने, हामी प्रायः टाइप २ मान्दछौं र तुरुन्तै उपचार सुरु गर्दछौं। यो मेरो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक गएको मार्ग हो।
सम्बन्धित: मधुमेह उपचार र औषधि
मेरो मधुमेहको उपचार गर्दै
टाइप २ मधुमेह भएका व्यक्तिहरूले अझै पनि इन्सुलिन उत्पादन गर्दछन्, त्यसैले उनीहरूलाई औषधी लिई दिइन्छ, र कहिलेकाँही ईन्सुलिन चिनीको स्तर कम गर्न। डाई जैस्वाल भन्छन, डाएट र व्यायामले उनीहरूको उपचारमा अक्सर ठूलो भूमिका खेल्दछ।
डाक्टरहरूले मलाई टाइप २ मधुमेह भएको बताएकोले मेरो सुरुको उपचार विधिले यो झल्कायो। मलाई रगतमा चिनी प्रबन्धको लागि मौखिक औषधी दिइयो, तर उनीहरूले चाहिएको ठाउँमा मेरो नम्बर प्राप्त गर्न यसले कहिल्यै राम्रो कार्य गर्न सकेन। मैले बेसल / बोलस (लामो-अभिनय) इन्सुलिन र खाना-समय (द्रुत-अभिनय) इन्सुलिनको संयोजन पनि प्रयोग गर्‍यो।
डायबेटस mellitus को साथ मेरो यात्रा को प्रबंधन को लागी आहार को लागी सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हिस्सा भएको छ। म सलाद भन्दा आलु मा छु। तर, समयसँगै, मैले यो सिकेँ कि मेरो खानाको छनौटको कुञ्जी मोडेरसन हो। म मिठो खाने बानी नै गर्दिन, तर कहिले काहिं म आइसक्रीमको स्कूपको आनन्द लिन्छु। भाग्यवस, म हिँड्न रमाईलो गर्छु र हरेक दिन त्यसो गर्छु।
अन्तत:, मैले गोली लिनेको प्रतिकार गरें। मैले धेरै प्रकारका प्रयास गरेको थिएँ, र तिनीहरूले मेरो सर्तलाई नियन्त्रण गरिरहेका थिएनन्। उल्लेख गर्न मिल्दैन, ती अप्रिय साइड इफेक्ट का कारणजस्तै वजन र पेट मुद्दाहरू।
पछिल्लो वर्ष,मैले सी-पेप्टाइड टेस्ट प्राप्त गरें जुन स्वादुपिण्डमा इन्सुलिन नाप्छ। मेरो परीक्षण नकरात्मक फिर्ता आयो, र मैले पत्ता लगाए कि मसँग टाइप १ मधुमेह सबै साथ छ।टाइप १ मधुमेह भएका मानिसहरूलाई नियमित इन्सुलिन शट चाहिन्छ, डा। जयस्वाल भन्छन्। यसले मात्र ईन्सुलिन लिँदा मलाई किन राम्रो महसुस भयो भनेर वर्णन गरेको छ।
इमानदारीपूर्वक, यद्यपि म यो निदानको डर गर्दछु, म उपचारको साथ सहि मार्गमा हुन पाउँदा खुसी छु। नयाँ औषधिहरू प्रयोग गरीरहेको तनाव मेरो लागि राम्रो थिएन, र जब म औषधिहरू बदल्छु मैले सधैं to देखि p पाउण्ड प्राप्त गर्‍यो।
सम्बन्धित: इन्सुलिनको कति खर्च हुन्छ?
मधुमेहको साथ बस्ने
डा। जयस्वाल भन्छन्, डायबेटिसले मानसिक रोग पनि निम्त्याउन सक्छ। यो एक भारी रोग हुन सक्छ र धेरै तनाव, डिप्रेसन, चिन्ता पैदा गर्न सक्छ। तपाईका डाक्टरहरूसँग यी भावनाहरू बाँड्न सहयोगी र सल्लाहकारहरू, सामाजिक कार्यकर्ताहरू र परिवारसँग कुरा गर्नु पनि उपचार योजनाको अभिन्न हिस्सा हो। अर्को शब्दमा, यसलाई एक्लै जान प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईको स्वास्थ्यसेवा टोली, साथीहरु, र सहायता समूहहरु बाट समर्थन खोज्नुहोस्। यो अवस्था आजीवन तपाईको साथमा हुन सक्छ, र समय कठिन भएमा ती मद्दत गर्न सक्छन्।
तपाईको शरीरलाई तपाईले भन्दा राम्रो कसैलाई थाहा छैन। यदि तपाईं आफ्नो वर्तमान मधुमेह हेरचाह संग सहज हुनुहुन्न भने, आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग इमानदार कुराकानी गर्नुहोस्। र, मेरो कथाबाट एक टिप लिनुहोस्: निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई कुन प्रकारको मधुमेह मेलिटस तपाईलाई उत्तम दीर्घकालीन मधुमेह व्यवस्थापनको लागि हो भनेर निश्चित रूपमा थाहा छ।
Marfan सिंड्रोम:5छिटो तथ्य तपाइँ जान्न आवश्यक छ
बलियो देखि कमजोर सम्म मांसपेशी relaxers को सूची
तपाइँ एक नुस्खा बिना adderall किन्न सक्नुहुन्छ
उच्च रक्त शर्करा स्तर चार्ट के हो
घाँटी दुखाई र चिसो को लागी काउन्टर औषधि भन्दा राम्रो
नाक र भीड को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि